Nispakhya National Weekly ( निस्पक्ष राष्ट्रिय साप्ताहिक ) online News Paper: कति सजिलो छ मानव मृत्युमाथिको व्यापार ?
कति सजिलो छ मानव मृत्युमाथिको व्यापार ?
- विष्णु गौतम, अध्यक्ष, लक्ष्मी प्रतिष्ठान
मिति २०६९ श्रावण २३ गते बुटवलबाट काठमाण्डौ आउँदै गरेको लु १ ख ७०५१ नम्बरको गाडीको ड्राइभर निदाउनको कारण गाडि दर्ुघटनाग्रस्त हुँदा १२ जनाको ज्यान गयो, २६ जना घाइते भए । दर्ुघटनाको कारण बुझेर मेरा एक मित्रले भन्दै थिए- एउटा साहुजीको लापर्वाही भनौं वा सानो चित्तले काम गर्दा त्यत्तिको ठूलो क्षति हुन पुग्यो । एउटै ड्राइभर राखेर धेरै ज्यान लिनेहरुलाई जनताले नै सडकमा लाम राखेर तिनीहरुमाथि गाडि दौडाउनु पर्ने - उनी आक्रोस पोख्दै थिए । नेपाल जस्तो भौगोलिक बनावट भएको देशमा लामो रुटमा रात्री बस चलाउँदा एउटै ड्राइभर राखेर रातभर गाडि चलाउँदा ड्राइभर थकान र निन्द्राले सुस्ताउन पुग्दछ । यो घटनामा पनि त्यही भएको बुझिन्छ । सायद आफ्नो जिम्मेवारी देखाउने साहुजी भएको भए २ जना ड्राइभर राखिन्थ्यो होला र त्यो दर्ुघटनामा पचासौं जना टुहुरा हुने थिएनन् होला, कयौंले सन्तान गुमाउनुको पीडा खप्नु पर्दैनथ्यो होला र कयौंले उपचारका लागि घरजग्गा धितो राख्नु पर्ने थिएन होला !
हुन त यो दर्ुघटनामा साहुजीको पनि र्सवस्व गएको जस्तो देखिन्छ तर ऊ त विमा कम्पनीको कारण सुरक्षित हुन्छ । यत्रो हत्याको वातावरण बनाउनेलाई कारबाही भने नेपालमा हुने गरेको छैन । त्यस्तालाई कारबाही गर्ने कानून पनि नेपालमा बनेको छैन । यस्तै कानूनको अभावले गर्दा दर्ुघटनामा सयौं मानिस मारेर पनि उन्मुक्ति पाउने अवसर नेपालमा छ । केही हप्ता अगाडिको कुरा हो, विविसि नेपाली सेवा कार्यक्रममा यस्ता आवाज यातायातकर्मिहरुबाट उठाइएको थियो जुन कार्यक्रममा म लगायत धेरै नै जिम्मेवार महानुभावहरुको उपस्थिति थियो । अझै स्मरण गर्न योग्य कुरा त यो थियो कि बस व्यवसायी संघका
अध्यक्षले मजदुरहरुको आवाजलाई दबाउँदै यस्तो हुँदै नभएको आरोप मात्र लगाईएको भनी कर्ुर्लिरहनु भएको थियो । साथमा भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तुलसी सिटौलाजिले समेत यस्तो दर्ुघटना हुने देश नेपाल मात्र हो र - भनेर गैरजिम्मेवारी देखाउनु भएको थियो ।
कारण जे भए पनि म आफु भने सडक दर्ुघटनामा दर्ुइ जना जवान छोरा गुमाईसकेको मानिस हुँ । कहिं कतै त्रुटि भएर नै दर्ुघटना भएको थियो र हामी मर्माहत हुन पुग्यौं । तर दर्ुघटनापछि भने दर्ुघटना कसरी रोक्न सकिन्छ - अरु कसैले हामीले जस्तो पीडा झेल्नु नपरोस् भनेर यतिखेर नेपालमा सडक दर्ुघटना कम गराउन सकिने विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौं । र, अति आवश्यक देखिएका केही कार्यक्रमहरु लक्ष्मी प्रतिष्ठान नामक संस्थाबाट गरिरहेका छौं । हाम्रो दर्ुइ बर्षो अध्ययनले निष्कर्षनिकालेको छ कि सडक दर्ुघटना हुने मुख्य कारणहरु भनेको ओभर कन्पिmडेन्स, सवारी नियम उल्लघंन, सडक व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, र विशेष गरी लामा रुटका गाडिहरुमा ड्राइभर नबदली एकै जनाले मात्र चलाउनु आदि छन् । सडकमा काम गर्ने केही प्रहरीहरु गैरजिम्मेवार देखिएपनि धेरैले दिलोज्यानले काम गरिरहेका छन् । १२ लाख ८० हजार सवारी चापलाई हर्ेदा उनीहरुको ३५०० को संख्या एकदम न्यून हो ।
अहिले सडक यात्रा यत्ति असुरक्षित बनेको छ कि परिवारको कुनै पनि सदस्य निर्धारित समयभन्दा २० मिनेट मात्र ढिलो भयो भने पनि सबैको ध्यान पहिला सडकतिर नै जान्छ । कतै यो रुटमा दर्ुघटना त परेन भनी पहिला आफन्त हिंड्ने सडकमा ध्यान पुर्‍याउँछन् । तर त्यही ठाउँमा आफुले सवारी चलाउँदा होस्, पैदल यात्रा गर्दा होस् नियम पालना गर्न जिम्मेवार हुँदैनन । वातावरणलाई सुधार गर्न जुट्नु भनेको त धेरैका लागि "कागलाई बेल पाक्यो, हर्षन विस्मात !" भनेको अवस्था छ ।
सडकमा अराजकता यत्ति बढेको छ कि आन्दोलनको पहिलो निशाना नै सडक बन्दछ । यही सडकमा ढुंगा फालिन्छ । टायर यहि सडकमा बालिन्छ । कहिले पुरा चक्का जाम गरिन्छ त कहिले यही सडकमा टुक्रे बन्द हुन्छ । केही दिनदेखी नेकपा एमालेको युवा दस्ताले सडकलाई विहान ६ बजेदेखि १० बजेसम्म बन्द गरेर र्सवसाधारण, विद्यार्थी र जागिरे सबैलाई सास्ती खुवाए । हुँदाहुँदा यो लेख लेखिरहँदा यातायात व्यवसायी स्वयम्को बन्द रे । श्रावण २६ गतेको यो दिनमा यतिखेर सडक भाडाका गाडी विहीन छ । सडकमा सुधार ल्याउनका लागि ट्राफिक प्रहरीले चलाएका मापसे, सिवे लगायतका केही अभियान निक्कै सफल भएका छन् । सहरी सडक दर्ुघटनाको संख्या निक्कै घटेको छ । तर खै किन नपचेको हो यातायात व्यवसायीहरुलाई यो सुधार - लापरबाही र गल्तीका लागि तिर्नुपर्ने रकम लगायतका कुराको विरोध गर्दै सवारी साधन नै ठप्प पारेर के चाँही सावित गर्न खोजेका छन् कुन्नि - यसबाट त उनीहरुको सामाजिक, पेशागत सबै जिम्मेवारीबाट विमुख भएको मात्र देखिन्छ । समस्याको समाधानमा सरकार पनि उदासिन छ । सरकार आफैं आफ्नो जिम्मेवारीबाट चुकेको जस्तो देखिन्छ र अन्य पक्षहरुलाई पनि जिम्मेवार गराउन नसकेको स्पष्ट छ । यसरी निमुखा हामी जनता सधैं मर्कामै छौं । साढेको जुधाइमा बाछाको मिचाइ भने झैं हामी सधैं दोहोरो मर्कामा छौं ।
यतिखेर आफ्ना पाँच कार्यक्रमहरु - बाल शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, सीप विकास, स्वास्थ्य तथा सवारी सचेतना- लाई मुख्य एजेण्डा बनाई अगाडि बढिरहेको लक्ष्मी प्रतिष्ठानले सवारी दर्ुघटना कम गराउन सकिने केही कार्यक्रमहरु तयार गरिरहेको छ । त्यसलाई असोज १ गतेभित्र र्सार्वजनिक गर्ने निर्ण्र्ाागरेको छ । यि कार्यक्रमहरुलाई सफल गर्न सकिएमा करिब ६० प्रतिशत दर्ुघटना कम गराउन सकिनेछ । यद्यपि यसका लागि इमान्दारी साथ कर्तव्यनिष्ठ भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । लक्ष्मी प्रतिष्ठानको तर्फाट प्रतिज्ञा गर्नुपर्दा उल्लेखित सबै कुरा गर्न प्रतिष्ठान प्रतिबद्ध छ । किनभने सडक दर्ुघटनामा नै दर्ुइ जना जवान तथा अन्तरार्ष्र्ि्रय सम्मान समेत पाएका छोराहरु गुमाएर उनीहरुकै सम्झनामा यो संस्था स्थापना भएको हो । उनीहरुको विछोडले हामीलाई पुग्न गएको क्षति र पीडालाई कसैले झेल्नु नपरोस् भन्ने मान्यता राखी हामी काम गरिरहेका छौं ।
भोलि प्रतिष्ठानद्वारा सडक दर्ुघटना न्युनिकरणका लागि गरिने अभियानको योजना तुहीन सक्ने मुख्य आधार भनेको यसमा लगानी गर्नुपर्ने रकम नै हो । हामीलाई यतिखेर विश्वास छ कि नेपाल सरकार लगायत विभिन्न राष्ट्रिय, अन्तर्रर्ााट्रय संघसंस्थाहरु सबैले सघाउनु हुनेछ । अहिलेको सामाजिक राजनितिक माहौल प्रतिकुल भएर सफल हुन नसके पनि सन्तान हुने लाखौं नेपालीहरुसंग हामी हात थापी पुरा गर्नेछौं । उनीहरुले सय दिंदा हामीले लाख पाउनेछौं, हजार दिंदा करोड । अन्ततः हाम्रो सडक न्युनिकरण अभियान सफल हुनेछ । परिणाम- हजारौं मानिसहरुको जिउज्यानको सुरक्षा हुनेछ । आशा गरौं आगामी दिनमा हामीले अखबारको मुख्य पृष्ठ र विद्युतिय संचारका हेडलाइनमा दर्ुघटनाका खबर आउने छैनन् । हाम्रो यात्रा सडकमा सुरक्षित बनाउनका लागि तपाई हामी सबैको योगदान जरुरि छ । हामी नागरिक दायित्व र जिम्मेवारी पुरा गरौं, व्यवसायी र सरकारलाई पनि तिनीहरुको दायित्व निर्वाह गर्न झकझकाउँ ।